mhando 0.9.8.0 – Welcome Yandex
Gumiguru 28, 2015 kubudikidza chipo 1 komenda
Pane zvakawanda kuti nyika chete Google Translate, panewo zvakawanda kuti nyika chete Bing Translate, pachena the ~ mamiriyoni 150 vokuRussia vari kuita zvinhu zvikuru, pamwe Yandex, zvikuru mukurumbira kutsvaka injini muRussia.
Yandex inotsigira mitauro yakawanda uye pave nemigumisiro yakasiyana kupfuura dzimwe injini, uyewo unyanzvi mumitauro anotaurwa mukati Russia akadai Bashkir, Kirghiz uye Tatar. Zvatakanzwa vakanga vava kukwanisa anyorewo kwemitauro, kuita uwandu mitauro vachitsigirwa car-rakashandurwa kuti whopping 95!
Kuwedzera Yandex uyewo akaparirwa zvakachinjwa munzira isu dhipuroya repair shanduro, saka zviri ikozvino zvinobvira moto zvatinoda eshanduro injini waungada kushandisa.
Takavawo zhinji (uye isu kureva VAKAWANDA) netsikidzi ngadzirambe dziri resununguro ichi, change danda achakupai yakanaka kuravira izvi:
Yandex muturikiri rutsigiro akawedzera
Added kusarudza kusarudza vaifarira Vashanduri arayire Via zvuva uye donhwe
Isa yakaoma tsikidzi mukati kushandura mumhanyi uye kushandura pasi kubudisa
Unocherekedza mumutauro pakusarudza UI (mazita mutauro refu)
KUISA rokushandura nhaurirano kwete rokukwidza musi wokutanga watinya
Haichaenderani kufumura Google makiyi externally
Kugadzirisa yakachena shanduro otomatiki vari utils Tab
Support Bashkir, Kyrghiz uye Tatar nekuvongwa Yandex – Now kutsigira 95 Languages!
Added Swahili kutsigira Bing
Akaderedza waiting nguva pakati mbiru mune kushandura vose 2 masekondi
Isa shortcodes nejira munhu <pp> Tag
New Google kuvake
Isa WP_Widget deprecation runhare kuti Wordpress 4.3
Minor aigadzire nokuti buddypress kutsvaka kusangana
Kugadzirisa zvimwe zviitiko apo https maURL aisazotyorwa rewritten
KUISA nyorazve rutsigiro tsamba mumitauro mitatu (Pari chete BSN)
Gumiguru 28, 2015 pa 12:25 ndiri
Iwe sezvo nguva yakanakisisa yakanakisisa! Thanks nokuti basa rako rakaoma!!